EVY's Kitchen: အသားလိပ်ကြော် (Beancurd skin roll)
ဒီလိုသရေစာလေးတွေကို စင်္ကာပူက Mall တွေမှာအမြဲတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အလွယ်တကူစားလို့ရတာကြောင့် ၀ယ်သူတွေလည်းများလှပါတယ်။ ခုလုပ်ပြထားတဲ့ အသားလိပ်ကိုတော့ Beancurd skin roll လို့ခေါ်ပါတယ်။ အထဲမှာ အသားပုဇွန်၊ မှိုနဲ့ မုန်လာဥနီတို့ ပါပြီး ထူးခြားတာက အသားတွေကိုထုပ်တဲ့အရွက်ကို ပါးလွှာတဲ့ပဲပြားနဲ့လုပ်ထားတာပါ။ အရသာတော်တော်ကောင်းလို့ ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးလိုက်တယ်ပါတယ်။ အသားကိုတော့ နှစ်သက်ရာ အသားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၀က်သားနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆီပါတဲ့အတွက် ပိုပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကြက်သားကို သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အဆီနဲနဲပါပါစေ။ ဒါမှကျစ်မနေပဲ စားလို့ကောင်းမှာပါ။
ကြက်သား (သို့) ၀က်သား ၂၀၀ ဂရမ်
ကြွက်နားရွက်မှို လက်တစ်ဆုပ်စာ (ရေစိမ်ပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ)
မုန်လာဥနီ အနည်းငယ် (အမျှင်လေးတွေခြစ်ထား)
ပုဇွန် ၆ ကောင် (၃ ပိုင်းခန့်စီပိုင်းထား)
ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ထက်ဝက်
သကြား လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်း
နှမ်းဆီ ၃ ၊၄ စက်
ကြက်သွန်ဖြူ အနည်းငယ် နုတ်နုတ်စဉ်း
အထက်မှာပြောထားတဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးကို သမအောင်ရောမွှေထားလိုက်ပါ
နောက်ပဲပြားရွက်ကို လေးထောင့်ကျကျလေးဖြတ်၊ ရေနဲနဲဆွတ်ပြီး ခုနကရောမွှေထားတဲ့ ကြက်သား (သို့) ၀က်သားအရော စားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာကိုထည့်ပေးပါ
အဲဒီနောက်မှတော့ ၁၀ မိနစ်ပေါင်းပေးပါ။ ပြီးရင် ဆီပူပူထဲမှာ ရွှေညိုရောင် သမ်းအောင်ပြန်ကြော်ပေးပါ
So sorry that I didnt post in English for suchalong period of time.
Delia, here is the recipe for you.
minced meat - 200g (Pork will be the best, but if you want to replace with chicken, try to choose boneless leg with skin)
shredded black mushrooms (~1/4 cup)
shredded carrot (~1/4 cup)
1/2 tsp of seasoning powder
Mixed all the above ingredients and let it set for about 10 mins.
In the mean time prepare the beancurd skin - cut them in square shape.
Placeacouple of Tbsp of meat mixture on the prepared beancurd skin.
Roll them as shown in figure and complete the rest.
Then steam them for about 10mins.
Deep fry them until golden brown, dish up and serve with chili sauce.
Posted by Evy at 6:54 PM
pal pyar; yout ka bal lo har lel ...bal mar wal lo. ya lel. thak.
Evy ပြောသလို ကြက်သားကို အဆီလေးပါ ပါအောင်ထည့်ပြီး အသားလိပ်ကြော်လေး လုပ်ကြည့်မယ် စားကောင်းမယ့်ပုံလေး။
That's called "Ngo Hiang"..
ပဲပြားရွက်ဆိုတာက Beancurd skin ကိုပြောတာပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့ ပါးပါးအရွက်လေးလေ တွေ့လား။ စင်္ကာပူမှာဆိုရင်တော့ NTUC မှာရနိုင်ပါတယ်
တရုပ်လို အဲလိုခေါ်တာ ခုမှပဲသိတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါ m. ဒီမှာတော့ Beancurd skin roll ဆိုပြီးရောင်းတာနဲ့ အဲလိုပဲသိနေတာ။
တီတင့်ရေ အမြဲအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်
မမရေ ပဲပြားရွက် ရန်ကုန်မှာဆိုဘယ်မှာရနိုင်လည်းသိပါလားရှင်
ညီမရေ။ အဲဒီပဲပြားရွက်ကို ရန်ကုန်ဘယ်နားမှာရမလဲဆိုတာတော့ အစ်မလဲ သေချာတော့ မသိဘူး။
တရုပ်တန်းလို နေရာမျိုးမှာရှာကြည့်ရင်ရော ရနိုင်မလားမသိဘူးနော်။ ဘလော့လာတဲ့သူများထဲက သိတဲ့သူရှိရင် ပြောခဲ့ကြပါဦး။
Probably, one can buy those dried bean-curd sheet..
Soak in water forawhile to make it soft..
But, needs to make sure it's not torn..
Else, very difficult to roll..
can i have the recipe in English? Tq.